ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ကို ပေါက်ဖော်ကြီးက အဆင်းဘီးတပ်ပေးနေတာလား? - Zet Star
ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အမေရိကန်ကို ပေါက်ဖော်ကြီးက အဆင်းဘီးတပ်ပေးနေတာလား?
အိုဘားမားလက်ထက်မှာ တရုတ်ယွမ်ငွေကို စျေးတင်ပေးဖို့ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်က ဂရုမစိုက်ဘဲ ယွမ်ငွေတန်ဖိုးဆက်ချထားခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် အိုဘားမားသက်တမ်းနှစ်ဆက်စလုံး နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာ တရုတ်ကအသာစီးရခဲ့တယ်။ အမေရိကန်ခမြာ ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ထရမ့်တက်လာတော့မှ ကုန်သွယ်မှုစစ်ဖြစ်ပြီး ဆယ်နှစ်လောက်အသာရခဲ့တဲ့ တရုတ်ကြီး အမေရိကန်အောက် ပြန်ရောက်သွားတယ်။ (ထရမ့်ကလည်း ဘယ်ချိန်ကတည်းက ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်မသိဘူး) ဒီပုံအတိုင်းဆို တရုတ်တော့ ကုန်းဆင်းပြီလို့ အားလုံးတွက်ထားကြတဲ့အချိန်မှာ မထင်မှတ်ဘဲဝူဟန်ဗိုင်းရပ်ဆိုတာကြီး ထပေါ်လာတယ်။
အသက်ရှူစက်တင်ရတော့မယ့်တရုတ်က ချက်ချင်းကြီး နေပြန်ကောင်းသွားတယ်။ တကမ္ဘာလုံးက ဗိုင်းရပ်ကြောင့် ဗျာများနေပေမယ့် သူတို့ကတော့အေးဆေးပဲ။ ပျော်ပွဲတွေတောင် ကျင်းပလို့။ အခု အန်ကယ်ဆမ်ပါကူးပြီဆိုတော့ အမေရိကန် တန်းဆင်းဇုံရောက်ပြီပေါ့။ ဒီပွဲမှာ ဘယ်သူကအမှန်အကန် ကစားပြီး ဘယ်သူက ပြင်သစ်မကြီးထောပတ်ရောင်းသလိုလုပ်နေသလဲဆိုတာတော့ စဉ်းစားရကြပ်တယ်။
တစ်ခါက ပြင်သစ်မတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရွာမှာအိမ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာရပ်တည်လာတယ်။ တစ်နေ့တော့ ဆူပါမတ်ကက်ကြီးတစ်ခု သူ့ဆိုင်လေးရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်၊လမ်းမတစ်ဖက်မှာ လာဖွင့်တယ်။ သူတို့က စျေးနှုန်းတွေကို ဆိုင်းဘုတ်ရေးပြီး ထောင်ထားကြတယ်။ အဲ့ထဲမှာ ထောပတ်ရပြီ၊ ၁၀-ဖရန့် ဆိုတာလည်းပါတယ်။
အကျိုးစီးပွားနဲ့ယှဉ်လာတော့ ပြင်သစ်မက တုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ သူ့ဆိုင်ပြူတင်းမှာ ဆိုင်းဘုတ်ပြန်ထောင်တယ်။ ထောပတ် ၉- ဖရန့်။ နောက်နေ့ကျတော့ ဆူပါမတ်ကက်ကြီးမှာ ဆိုင်းဘုတ်အသစ်ဖြစ်နေတယ်။ ထောပတ်ရပြီ ၈-ဖရန့် တဲ့။ ဘယ်ရမလဲ။ ပြင်သစ်မကလည်း အသစ်ပြင်ရေးလိုက်တာပေါ့။ ထောပတ် ၇-ဖရန့် လို့။
အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတုန်း အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ဖေါက်သည်တစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ဆိုင်းဘုတ်ကို လက်ညိုးထိုးရင်း ပြောလာတယ်။ “မဒမ် ခင်ဗျားထောပတ်ကိုစျေးလျော့ပြီး ဘယ်လောက် ကြာကြာရောင်းနိုင်မှာလဲ။ ဒီကုမ္မဏီကြီးတွေက စျေးပေါပေါနဲ့ရောင်းနိုင်အောင် အများကြီးဝယ်လှောင်နိုင်တယ်ဗျ။ ခင်ဗျားလိုဆိုင်သေးသေးလေးက သူတို့နဲ့ယှဉ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဒီတော့ ပြင်သစ်မက ကိုယ်ကိုရှေ့ကိုင်းပြီး တိုးတိုးလေးပြန်ပြောတယ်။
“မွန်စီယာ စိတ်မပူနဲ့။ ကျမဆိုင်မှာ ဘာထောပတ်မှ မရောင်းဘူး”
နေနော် (တချို့ပြိုင်ပွဲတွေက ကိုယ်ကသာပြိုင်တယ်ထင်နေတာ၊ တစ်ဖက်ကကိုယ့်ကို အဆင်းဘီးတပ်နေတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်တယ်)
← ရွှေဆိုင်နားက သစ်ပင်နဲ့ ဓားဆိုင်နားက သစ်ပင်တို့ ဘာတွေ ကွာခြားသွားလဲ?
အမှန်တကယ် သာသနာထွန်းကားခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ် (ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ) →